Miisaaniyadda iyo Maaliyadda | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waxaan ku faannaa mas'uuliyad iyo feejignaan mas'uuliyad maaliyadeed si aan ugu adeegno bulshada. Maamulka maareynta dhaqaalaha ee Gudiga iyo Maamulka ayaa keydiyay canshuur bixiyeyaasha lacag waxayna xaqiijiyeen in 81.16% miisaaniyadeena sanadlaha ah ay ku wajahan tahay barnaamijka waxbarista si loo kordhiyo taageerada ardayda iyo waxbarista.
Qiimaynta bondka ee Degmadeenna Aaa Moody (qiimeynta ugu sareysa ee suurtogalka ah) waxay caddeyn u tahay maareynta maaliyadeed ee mas'uulka ah iyo kormeerka maaliyadeed ee xoogga leh. Minnetonka waa mid ka mid ah seddex degmo oo kale oo ku yaal Minnesota iyo mid ka mid ah 70ka wadan ee kaliya. Qiimeyntani waxay adeegsaneysaa dhowr arrimood oo maaliyadeed, laakiin qiimeynta Minnetonka waxay in badan ku saleysan tahay maareynta maaliyadeed ee Degmadeena marka loo eego cabirka iyo nooca saldhigga canshuuraha.
Minnetonka miisaaniyaddiisa hawlgalka sanadlaha ah ee arday kasta (oo ku saleysan celcelis ahaan xubinnimada maalinlaha ah) waa $ 10,836 loogu talagalay FY17. Marka loo eego Profiles-ka Dugsiyada Degmooyinka ee ay daabacday Waaxda Waxbarashada ee Minnesota, kharashka ardaygii ee Minnetonka waa $ 712 oo ka hooseeya celceliska gobolka iyo $ 1,116 ka hooseeya celceliska gobolka ee degmooyinka la midka ah. Minnetonka wuxuu kujiraa 175aad 332 degmo dugsiyeedka Minnesota guud ahaan kharashyada ku baxa arday kasta.
Qorshe caymis caafimaad oo is-caymis ah ayaa shaqaalaha u keydineysa Degmada $ 6 milyan sanadkii oo ah khidmadaha caymiska.
Minnetonka wuxuu kasbaday abaalmarinta Abaalmarinta Hogaamiyaha Tamarta ee Hay'adda Ilaalinta Deegaanka ee Mareykanka (EPA) si loo wanaajiyo waxtarka tamarta iyo inuu yahay Horjooge Sare si loo gaaro celcelis ahaan dhibcaha waxqabadka tamarta tamarta ee 81 dhammaan faylalka ay ka kooban tahay dhammaan dhismayaasha. Degmadeennu waa mid ka mid ah 211 Hoggaamiyeyaasha Xiddigaha Tamarta ee waddanka oo idil dhammaan qeybaha kala duwan ee warshadaha tan iyo markii barnaamijka la bilaabay 2004.
Minnetonka wuxuu sii wadaa inuu diirada saaro barnaamijyada hal abuurka leh iyo shaqaale tayo sare leh si qoysaska loogu soo jiito Degmadeena. Kordhinta diiwaangelinta qorshaysan waxay ka faa'iideysaneysaa dhammaan barnaamijyada iyo ardayda degmada waxayna ka ilaalisaa Degmadeena dhimista miisaaniyadda inta lagu jiro xilliyada aan la hubin. Markay Degmadu ku dhowdahay xadka isqorista ee loo diyaariyey dugsi kasta, xeelado kale ayaa loo baahan doonaa si loo joogteeyo dhaqaalaha heer loo baahan yahay si loo ilaaliyo shaqaalaha iyo barnaamijyada.
Minnetonka waa degmada ugu sareysa ee loo xushay xulashada waalidka iyada oo loo marayo qaynuunka Diiwaangelinta Furan ee Minnesota. In ka badan 3,200 oo arday ayaa doortey inay iskuul ka furaan Minnetonka Schools oo ka kala yimid 40 degmo dugsiyeed oo ku yaal Minnesota.
Minnetonka waxay ka faa'iideysatay jawi dhisme tartan iyo dulsaar hooseeya si ay u maal gashato dayactirka muddada dheer ee dhismayaashayada. Dhammaan iskuulada Degmooyinka iyo Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka waa la dayactiray tan iyo sanadkii 2009. Xaaladda wanaagsan ee dhismayaashayada waxay u muujineysaa dhammaan dadka soo galaya in Degmada Dugsiga Minnetonka ay tahay meel ay muhiim ka tahay barashada iyo howlaha bulshada.
Si ka duwan inta badan degmooyinka kale ee Minnesota iyo dalka oo dhan, Minnetonka wuxuu ka cafiyey cashuur-bixiyeyaasha bixinta xarumaha isboortiga iyada oo loo marayo iskaashiyo dawladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay oo maalgeliyey farshaxanno gaar ah oo wanaagsan iyo xarumo isboorti. Tani waxay u oggolaaneysaa lacagaha Degmada inay diiradda saaraan meelaha wax lagu barayo. Waad ku mahadsan tahay Magaalada Minnetonka iskaashiga Xarunta Farshaxanka ee 7 ee Dugsiga Sare ee Minnetonka, naadiga Minnetonka Diamond Club ee aruurinta lacagaha lagu bixinayo Halyeeyada iyo Goobaha Dhaxalka, Ururka Xeegada Dhallinyarada Minnetonka ee maalgelinta xarunta Pagel Center iyo Pagel cusub. Xaashida II, ururka 'Minnetonka Track and Field association' oo gabi ahaanba maalgeliya beddelka wadada, Naadiga 'Minnetonka Anchor Club' iyo 'Minnetonka Aquatics' barnaamijyada waxtarka weyn ee dib-u-habeynta barkadaha MME ee 2009 iyo MMW ee 2014, iyo kooxda loo yaqaan 'Touchdown Club' ee tabarucaadka ugu weyn ee Tonka Dome , Einer Anderson Stadium, iyo Veterans Field, waalidiinta kubada cagta iyo shakhsiyaadka ku deeqaya ee maalgelinaya garoonka kubada cagta / lacrosse oo buuxa, iyo Barnaamijka Isboortiga Dhallinyarada ee Hennepin County ee deeqaha lagu taageerayo maxkamadaha teniska ee MME, oo ah goob lagu ciyaaro oo ku taal Groveland, dusha sare ee macmalka ah ee garoonka MHS JV baseball, iyo dusha sare ee macmalka ah ee garoonka tababarka MHS football / lacrosse.
Laga soo bilaabo 1999, Aasaaska Iskuulada Dadweynaha ee Minnetonka waxay ku dhowaad $ 1.1 milyan gudoonsiisay, deeqaha macalimiinta oo keli ah, manhaj sare u qaaday dhamaan maadooyinka tacliinta: teknolojiyadda, farshaxanka wanaagsan, waxbarashada carruurnimada hore, waxbarashada gaarka ah iyo inbadan.
Xirfadladeena maaliyadeed waxay u heellan yihiin bixinta nidaamka ugu kharashka badan uguna waxtarka badan ee suurtagalka ah ee lagu taageerayo laguna kobcinayo jawiga waxbarasho iyo howlaha Dugsiga Dadweynaha Minnetonka, iyadoo la siinayo adeegyo tayo leh ardayda, waalidiinta, cashuur-bixiyeyaasha iyo shaqaalaha.
Siyaasadda Qoondaynta Miisaaniyadda Guddiga Dugsiga Minnetonka waxay u jiheysaa 77% miisaaniyadda sanadlaha ah ee Degmadu waxbarista. Maamulka degmadu wuxuu cunaa oo keliya 4% miisaaniyadda hawlgalka sanadlaha ah.
Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay heleen Shahaadada Heerka Sare ee Warbixinta Maaliyadeed sanad walba illaa 1995.
Warbixinta Hantidhowrka Nadiifi FY 2020
Bishii Diseembar 3, 2020, Guddiga Iskuulka Minnetonka wuxuu ka helay warbixin xisaab hubin nadiif ah shirkadda xisaabaadka madaxa bannaan ee CliftonLarsonAllen.
Soo Koobid Fulineed
Warbixinta Hanti Dhawrka Maaliyadeed ee Dhameystiran
Miisaaniyadda Sannad dugsiyeedka 2020-2021
Dakhliga iyo Kharashaadka Degmooyinka: Miisaaniyadda FY 2020 iyo FY 2021
Garaaf taariikhi ah oo ka mid ah muuqaalka laba jibaaran ee degmada oo lagu daray toban sano
Deynta Degmo ee Ka Hooseysa Celceliska Toddoba-Degmo ee mitrooga ah
Sharaxaad ku saabsan Maaliyadda Dugsiga ee Minnesota
Kaarka Warbixinta ee Waaxda Waxbarashada ee Gobolka Minnesota ee loogu talagalay Dugsiyada Minnetonka